भारतबाट आलु आयत नभएपछि नेपालको आलुले राम्रो मूल्य पायो ! – AB Sansar
November 11, 2020 adminLeaveaComment on भारतबाट आलु आयत नभएपछि नेपालको आलुले राम्रो मूल्य पायो !
कार्तिक २६ ,काठमाडौं । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भारतबाट आउने आलु बन्द हुँदा यो वर्ष सल्यानमा उत्पादित आलुले राम्रो मूल्य पाएको छ । विगतका वर्षहरूमा १५ देखि २५ रुपैयाँसम्म बिक्री गर्दै आइरहेका किसानले यो वर्ष भने ३५ देखि ५५ रुपैयाँ किलोसम्म बिक्री गरेको बागचौर नगरपालिका– १२ बाफुखोलाका टीका केसीले बताइन् । सल्यानका आलु बढी मात्रामा पोखरा, दाङ, बुटवल जाने गरेको छ । खेतबारीमै पुगेर खरिदकर्ताले आलु लिएर जाने गरेकाले बजारको समस्या नभएको आलु खेती गर्दै आएका अगुवा कृषक चित्रबहादुर वलीले बताए । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****
उत्पादन भएको आलुमध्ये १२ हजार ५५ मेट्रिक टन आलु आन्तरिक र चार हजार सात सय ४० मेट्रिक टन बिउमा गरी जम्मा १६ हजार सात सय ९५ मेट्रिक टन आलु आन्तरिक रूपमा नै खपत हुने गरेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला *****
दाङमा भारतीय नम्बर प्लेटको कारमा भेटियो तीन बालकको शव